China 6 Axis Arc ịgbado ọkụ Robot 1450mm ogwe aka ogologo na Megmeet ịgbado ọkụ isi iyi Onye nrụpụta na Supplier |Yunhua
Ezigbo onye na-emepụta ihe eji eme ihe na-emepụta ihe nke China, Top 3 na China, Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ obere na ọkara.Arc ịgbado ọkụ robot na ogwe aka ogologo: 1450mm
Nhazi ọkọlọtọ Robot nke kacha ere ahịa:
-Megmeet ịgbado ọkụ isi iyi
- Ọwa oyi ikuku
- Pendanti nkuzi & kabinet njikwa
Ahịa kacha elu:Ihe karịrị 5000 nkeji / afọ
Ọ dị mfe ịmụta:Vidio nkuzi akwadoro
Arụmọrụ kwụsiri ike:Ahụmahụ afọ 10
Ọnụ ala:Ọ dị mma maka obere ụlọ mmepụta ihe na ọkara
-Robot ahụ: HY1006A-145
- Weld ike isi iyi: Megmeet Ehave CM 350AR
- Ọkụ ịgbado ọkụ: ọkụ ọkụ Loyee gas jụrụ oyi ma ọ bụ Honyen gas jụrụ oyi
-Wire feeder na 0.8 / 1.0 waya roller
-LNC njikwa na panel
-Mbukota osisi maka mbupụ
Ọwa Welding Nhọrọ
Loyee Robot Welding Ọwa
High torque na eyi na-eguzogide cable
Ikike mmepụta ihe nke teknụzụ mgbochi ọgụ
Ọsọ dị elu na nhazi nke ọma nke ngwaọrụ mgbochi ọgụ.
Ọkụ waya: 0.8 ~ 1.0mm
Ụzọ na-ajụ oyi: gas jụrụ oyi (ọ bụrụ maka ịgbado ọkụ na ịgbado ọkụ ugbu a karịa 150A, biko họrọ ọwa mmiri na-ekpo ọkụ)
Honyen Robot Welding Ọwa
Ọsọ dị elu na ngbanwe ziri ezi nke ngwaọrụ mgbochi ọgụ
Ngwa nhazi ndị ọzọ
Nlereanya Megmeet Ehave CM 350
Voltaji 3*380V±25% 30--80HZ
Enyere ike ntinye 13.5KVA
Ihe kpatara ike 0.94
Ịrụ ọrụ 86%
Obere OCV 63.3V
Enyerela ihe nrụpụta ugbu a 30A-400A
Voltaji mmepụta ewepụtara 12V-38V
Waya Dia 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm
Ọkwa IP IP23S
Ọkwa mkpuchi H
Ọnọdụ jụrụ oyi Ikuku jụrụ oyi
Ụlọ ọrụ nchịkwa
Nha kabinet 603mm * 502mm * 760mm
Ọkwa IP IP54/IP65
Okpomọkụ Na-arụ ọrụ: 0-45 ℃Nchekwa: -10 ~ 60 ℃
iru mmiri Kachasị 90% (enweghị condensation
Voltaji 3*380V 50~60HZ
Sistemụ jụrụ oyi Fan jụrụ oyi
Ogologo eriri USB Ọkọlọtọ: 5M, Oke:12M
Ụdị nzikọrịta ozi Pulse
Nzaghachi Waya n'oge na-azụ
Nri waya dị nro, enweghị mkpokọ na mwụpụ
Ike mgbochi nnyonye anya siri ike
Ịnyịnya igweFRame Robot na-arụ ọrụ ọdụ
Ụgbọ ala Robot na-arụ ọrụ
Foto ndị dị na ụlọ ọrụ ndị ahịa
Ihe nlere igwe ịgbado ọkụ
20 ~ 80% RH (Ọ dịghị condensation) 170kg Ala/Ulo ụlọ
± 170° +80°~-150° +95°~-72° ± 170° +115°~-140° ± 220° IP54/IP65(aka)
Beijing Essen Welding & Cutting ngosi
China International Industry ngosi – CIIF
Ihe ngosi Ngwá Ọrụ China International Machine
Q. Gịnị bụ isi ahịa nke gị robot?
A. Ugbu a robot anyị nwere ike ịrụ ọrụ maka ụgbọ ala, nhazi igwe, igwe ugbo, arịa ụlọ nchara, ume ọhụrụ, nchekwa na nnyefe, igwe injinia, akụrụngwa anụ ahụ, igwe anụmanụ, igwe kwụ otu ebe wdg.
Q.kedu ụdị ọrụ ị nwere ike inye?
A. N'ihe gbasara ngwa, ịgbado ọkụ, aka, ịhọrọ na ebe, eserese, palletizing, ịkpụ laser, ịgbado ọkụ laser, ịkpụ plasma na ihe ndị ọzọ.
Q. Kedu ụdị usoro ịgbado ọkụ ị nwere?
A. Maka ngwa ịgbado ọkụ, anyị nwere ike na-enye argon arc ịgbado ọkụ, mag ịgbado ọkụ, gas ọta ịgbado ọkụ, tig self fusion ịgbado ọkụ, tig waya nri ịgbado ọkụ.
Q. Gịnị bụ ika nke ike iyi ị na-enye maka robot?
A. Ugbu a maka nhazi ọkọlọtọ: Megmeet na AoTai.
Q. Ị nwere usoro njikwa nke gị?
A. Ee, n'ezie anyị nwere.Ọ bụghị naanị na anyị nwere usoro nchịkwa, a na-emepụta akụkụ kachasị mkpa nke robot: reducer.Ọ bụ ya mere anyị ji nwee ọnụ ahịa kacha asọmpi.
Mgbe ahịa Service
Oge nkwa nke ngwaahịa bụ otu afọ site na ụbọchị nnyefe.Ọ bụrụ na igwe ịgbado ọkụ daa n'oge oge ikike (ma ewezuga ọdịda nke onye na-azụ ya mere na-ekwesịghị ekwesị), Honyen Robot ga-ahụ maka mmezi ruo mgbe ọ ga-edochi ngwa ọhụrụ (EXW), yana Honyen ga-akwụ ụgwọ ya. adịghị agụnye);Ọ bụrụ na akụrụngwa dara n'ihi iji onye zụrụ ya eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi, ụlọ ọrụ Honyen ga-ahụ maka mmezi na ụgwọ maka akụkụ ndị ọzọ.
N'ime oge akwụkwọ ikike, ọ bụrụ na akụrụngwa dara ada, ndị ọrụ ọrụ nka nke onye na-ere ahịa ga-akwadebe ngwaọrụ ndị dị mkpa na akụkụ mapụtara n'ime awa 8 ka ha kwenyechara ọdịda akụrụngwa na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na saịtị, wee rute na saịtị ahụ n'ime awa 24. malite mmezi, nchọpụta nsogbu (ma e wezụga ihe kpatara anya).
Kwa afọ, dabere na ọnọdụ ahịa n'ezie na mkpa nke ndị ọrụ mpaghara, ụlọ ọrụ ahụ na-eme nletaghachi ọrụ teknụzụ mpaghara n'efu (ewezuga ụgwọ ọrụ maka iji dochie akụkụ na akụrụngwa).
N'ikwekọ na ngwaahịa ndị ụlọ ọrụ anyị na-ere na akụkụ ndị a na-emekarị na akụkụ ndị na-eri nri nke robot welding zuru ezu, anyị na-ekwe nkwa ịnye ọrụ ndị a na-ahụkarị.Akụkụ ahụ mapụtara dị na ụlọ nkwakọba ihe (ma e wezụga ngwaahịa pụrụ iche).A na-ekwe nkwa na a ga-enye akụkụ ndị a na-emekarị na ihe ndị a na-eri nri n'oge dị ka usoro ahụ si dị, a na-enyekwa akụkụ ndị pụrụ iche dịka nkwekọrịta nke ndị abụọ ahụ kwadoro.
Mgbe njedebe nke oge akwụkwọ ikike, ọ bụrụ na akụrụngwa daa, onye na-ere ere ga-aga n'ihu na-enye ọrụ nlekọta maka onye na-azụ ya, kwụọ ụgwọ nke dochie ngwa, ma kwụọ ụgwọ ọrụ isi maka ọrụ ụlọ ruo n'ọnụ ụzọ.
Dị ka onye na-azụ ahịa chọrọ, onye na-ere ahịa ga-ahụ maka nkwalite ngwa ngwa akụrụngwa nke onye na-azụ ya na-eji maka Robot ịgbado ọkụ Mig n'efu.
Nke gara aga: 1430mm ogwe aka ogologo ijikwa robot maka nbudata na ibutu
6 Axis akpaaka ịgbado ọkụ Robot
Ngwa nke Arc Welding Robots
Robot akpaaka Tig Welding
Ọnọdụ ịgbado ọkụ akpaaka
Carbon Steel Metal Fabrication Robot ịgbado ọkụ
Igwe eji agbado ọkụ nke China
Robot na-emebi emebi